YEYINTNGE(CANADA): Sunday, May 31
၁၉၉၀ ခုနှစ် ၀န်းကျင်လောက်က မြကျွန်းသာကို အပန်းဖြေစခန်းအဖြစ်စပြီး အကောင်
အထည်ဖော် လုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ လုံးဝမကိုက်တော့လို့ ပြန်အပ်၊ အဲ့ဒီ
ကနေ တပ်မတော်လက်ထဲရောက်တယ်။တပ်မတော်ကနေမှ စည်ပင်ကို ပြန်လွှဲခဲ့ပြီး
တဲ့နောက် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ မြကျွန်းသာကို အများပြည်သူ အပန်းဖြေ
နားနေရာ နေရာအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ဖို့ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကို လွှဲခဲ့တာပါ။ အရင်အစိုးရလက်ထက် ဦးအောင်သိန်းလင်း မြို့တော်ဝန်အဖြစ် တာဝန်ယူတဲ့အချိန်
က ပုဂ္ဂလိကကို လွှဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီတုန်းကတော့ အများပြည်သူ အပန်းဖြေ၊ အနားယူမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေပဲ
လုပ်ရမယ်၊ နှစ်ပေါင်း ၃၀ အထိ (၂၀+၅+၅) အထိပဲ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးမယ် ဆိုတဲ့
အချက်တွေနဲ့ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေ ကို ငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ သိရတယ်။ အရင်အစိုးရလက်ထက်က ဘာပဲငှားငှား နှစ် ၃၀ မူနဲ့ပဲ ငှားလေ့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်
လည်း ရတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေက ရေပေါ်ဂေါက်ကွင်း၊ ချားရဟတ်တွေလို အများပြည်သူ
အပန်းဖြေနိုင်မယ့် လုပ်ငန်းတွေ၊ အများပြည်သူ နားနေစားသောက်နိုင်မယ့် ဆိုင်
တစ်ချို့ကိုပဲ ဖွင့်လှစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
အရင်အစိုးရလက်ထက်က ချုပ်ခဲ့တဲ့ စာချုပ်ကို ဦးရဲထွဋ်တို့ အခုအစိုးရလက်ထက်
ရောက်တော့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှာ ပြန်ပြင်ချုပ်လိုက်ကြပါတယ်။အရင်အစိုးရ
လက်ထက်က နှစ် ၃၀ အထိပဲ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးထားတာကို အခု အစိုးရလက်ထက်
ရောက်တော့ နှစ် ၆၀ အထိ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးပစ်လိုက်တယ်။ နှစ် ၆၀ ဆိုတာ
တစ်သက်လုံး လုပ်စားဖို့ ပေးလိုက်တာနဲ့ သိပ်မခြားနားဘူး၊ တစ်ဖက်ကကြည့်ရင် အပြတ်ရောင်းစားလိုက်သလိုပါပဲ။အဆိုးဆုံးက အများပြည်သူ အပန်းဖြေ၊ အနားယူမှု
နဲ့ လုံးဝမသက်ဆိုင်တဲ့ ရှော့ပင်းစင်တာလို စီးပွားဖြစ်အဆောက်အအုံတွေကိုပါ
တရားဝင်တည်ဆောက်လုပ်ကိုင်ခွင့်တွေကိုပါ တရားဝင်စာချုပ်ထဲ ထည့်ချုပ်ပြီး ခွင့်ပြုပေးလိုက်ကြတာပါ။
အများပြည်သူပိုင်၊ အများပြည်သူ အပန်းဖြေတဲ့နေရာကို ဒီလိုစာချုပ်ပြန်ပြင်ချုပ်ပြီး
ပေးတဲ့နေရာမှာလည်း အများပြည်သူကို လုံးဝချပြခြင်းမရှိဘဲ ပြန်ပြင်ချုပ်ပစ်
လိုက်ကြတာပါ။အသိပေးထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိပဲ စာချုပ်ပြန်ပြင်ချုပ်ပစ်လိုက်ကြတဲ့အပြင် အခု မြကျွန်းသာထဲမှာ စီးပွားဖြစ်အဆောက်အအုံတွေ ဆောက်တော့လည်း စာချုပ်
ပါ စည်းကမ်းချက်တွေကို ဘယ်လောက်အထိချိုးဖောက်ပြီး လုပ်နေတယ်၊ ငှားရမ်းခ
အပေါ်မှာလည်း နိုင်ငံတော်ဘယ်လောက်အထိ နစ်နာခဲ့တယ်၊ တယ်ဆိုတာကို
Eleven Media Group ၀က်ဘ်ဆိုက်နဲ့ Facebook မှာ တင်ထားတဲ့ စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းတွေကိုကြည့်ရင်လည်း အားလုံးသိနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီနစ်နာမှုတွေထဲမှာ အဆိုးဆုံးက ငှားရမ်းခကိုကျတော့ “အများပြည်သူအတွက်”
ခေါင်းစဉ်တပ်ထားပြီး မတန်တဆလျော့ပေးထားတယ်၊ တကယ်လုပ်တော့ စီးပွားဖြစ်
လုပ်စားကြတဲ့အချက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခါ အများပြည်သူအတွက်ရော၊ နိုင်ငံတော်
အတွက်ပါ နစ်နာမှုတွေ ပေါ်လာတယ်။
လက်ရှိ မြကျွန်းသာထဲကိုသာ ၀င်ကြည့်လိုက်ရင် မြကျွန်းသာဟာ အများပြည်သူ အနားယူအပန်းဖြေမှုနဲ့ မဆိုင်တဲ့ ရှော့ပင်းစင်တာတွေ အပြိုင်အဆိုင်တည်ဆောက်မှု
ဒဏ်ကို ခံနေရတာ တွေ့ကြရမှာပါ။၀င်လိုက်တာနဲ့ အ၀င်အ၀က အရင်ရေလွှာလျှောစီး
နေရာကစပြီး တစ်ခြမ်းလုံးမှာ အပင်အချို့ကို ခုတ်၊ ဖောင်ဒေးရှင်းတွေကို အခိုင်
အမာချ၊ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံတွေ ဆောက်၊ တစ်ချို့နေရာတွေမှာ ၁၈ ပေ၊
ပေ ၂၀ လောက်အထိ နက်မယ် လို့မှန်းဆရတဲ့ မြောင်းကျယ်ကြီးတွေ နှိုက်တူးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်မြေလိုသဘောထား လုပ်နေလိုက်ကြတာ အပြိုင်အဆိုင်ပါပဲ။
ဖောင်ဒေးရှင်းချတယ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာလဲ တစ်ကယ့်ကို အခိုင်အခံ့ အောက်ကိုနှိုက်
တူးပြီး အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံဆောက်ဖို့ ဖောင်ဒေးရှင်းကို ချထားကြတာ။
သုံးထပ်ခွဲမြင့်တဲ့ အဆောက်အအုံတစ်လုံးဆို ပြီးတောင်ပြီးတော့မှာပါ။မြောင်းကျယ်
ကြီးလို့ဆိုတဲ့ နေရာမှာ အခုတူးထားတဲ့ မြောင်းထဲမှာ ဘက်ဟိုးတစ်စီးဆင်းပြီး
မြေတူးနေတာ လမ်းပေါ်ကကြည့်ရင် ဘက်ဟိုးခေါင်မိုးတောင် မမြင်ရပါဘူး။ ကျယ်လည်းကျယ်ပါတယ်။ တစ်ချို့နေရာမှာ ၁၈ ပေ၊ ပေ ၂၀ လောက်အထိ
မြကျွန်းသာရှေ့ဖက်၊ လက်ရှိဆောက်နေတဲ့ နေရာနဲ့ ကပ်လျက်မှာရှိတဲ့ အများပြည်သူ ကားရပ်နားတဲ့နေရာ၊ နံနက်စောစော အများပြည်သူ ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တဲ့နေရာကလည်း အခုဆို ဆောက်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ အုတ်၊ သံချောင်း၊ သစ် စတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း ပုံတဲ့နေရာ၊ သံချည်သံကွေး လုပ်နေတဲ့နေရာ၊ လက်သမားလုပ်တဲ့ နေရာအဖြစ် ကုမ္ပဏီက ကိုယ်ပိုင်တဲ့မြေလို အသုံးချပြီး
ထပ်ပြီး မြင်လို့မကောင်းဆုံး အရာကတော့ အင်းယားကန်စပ်ထဲအထိဆင်း၊
အင်းယားကန်ရေပြင်ထဲ အုတ်တံတိုင်းဆင်းခတ်၊ အုတ်တံခတ်ထားတဲ့ရေပြင်ကို
မြေပြန်ဖို့ပြီး မြေနေရာချဲ့ထွင် တည်ဆောက်နေမှုပါပဲ။ တိတိကျကျ ပြောရမယ်
ဆိုရင်တော့ အင်းယားကန်ရေပြင်ပေါ်ကို ခိုးချဲ့ထားတယ်လို့ ပြောရမှာပါ။
မြကျွန်းသာဟာ အများပြည်သူ အပန်းဖြေနားနေရာဖြစ်လို့ အများပြည်သူ နားနေဖို့
အတွက်ဆိုပြီး ဒါတွေကို ဆောက်နေကြတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အများပြည်သူ
အပန်းဖြေမှုနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ ရှော့ပင်းစင်တာတွေပါတဲ့ စီးပွားဖြစ် အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံတွေ ဆောက်လုပ်နေကြတာဖြစ်ြ ပီးလုပ်ငန်းရှင်သုံးဦးက တည်ဆောက်နေကြတာပါ။
ကမ္ဘာအေးစေတီလမ်းဘက် မြကျွန်းသာ မျက်နှာစာထိပ်မှာ တည်ဆောက်နေတာက
Mandalay Golden Wing ကုမ္ပဏီပါ။ Inya Palace ကုမ္ပဏီအမည်နဲ့ တည်ဆောက်
နေပါတယ်၊ သူ့ရဲ့ နောက်ဘက်တွေမှာ တည်ဆောက်နေတာကတော့ Magic Land
ကုမ္ပဏီနဲ့ တခြားလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးလို့ သိရပါတယ်။အင်းယားကန်စပ် ရေပြင်ထဲ
အထိဆင်းပြီး ခြံခတ်တာကတော့ အဲ့ဒီသုံးဦးစလုံးပါပဲ။ ဒါက လက်ရှိမြကျွန်းသာရဲ့ အခြေအနေမှန်တွေပါ။
ချုပ်လိုက်ရင် အများပြည်သူ အပန်းဖြေနားနေရာ၊ အများပြည်သူပိုင်နေရာမှာ
မဆောက်သင့်တဲ့ အထပ်မြင့်တွေ ဆောက်၊ အပန်းဖြေမှုနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ ရှော့ပင်း
စင်တာပါတဲ့ စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်းတွေအဖြစ် မြကျွန်းသာကိုလည်း ပြောင်းလဲ
ပစ်နေကြပြီလို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့မှာ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်ပင်သာယာရေး
ကော်မတီနဲ့ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတွေ မြကျွန်းသာ အပန်းဖြေဥယျာဉ်အတွင်းက
မြေငှားရမ်းမှုအတွက် အချက် ၂၄ ချက်ပါ စာချုပ်ကို ပြင်ဆင်ချုပ်ဆိုကြပါတယ်။
၂၄ ချက်ထဲကမှ လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းတဲ့အထိ အရေးယူလို့ရတဲ့ စည်းကမ်းချက်
ချိုးဖောက်မှုကြီး အချို့ကိုပဲ ထုတ်နှုတ်ပြချင်ပါတယ်။
စာချုပ်ရဲ့ စည်းကမ်းချက်အမှတ် ၇ အငှားချထားခြင်း ခံရသူ၏ တာဝန်ဆိုတဲ့ အချက်
ရဲ့ အပိုဒ်(ဒ) မှာ ‘ရေပြင်ပေါ်တွင်ဖြစ်စေ ရေပြင်ကိုမြေဖို့၍ဖြစ်စေ အသုံးချခြင်း
မပြုရ၊ မြေဧရိယာ ကျယ်ဝန်းလာအောင် မပြုလုပ်ရ’ ဆိုပြီး သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
အခု လက်ရှိ ဆောက်နေတဲ့ အဆောက်အအုံ သုံးခုစလုံးဟာ အင်းယားကန်ရေထဲ
အထိဆင်း၊ အုတ်တံတိုင်းခတ်မြေဖို့ပြီး မြေနေရာချဲ့ထွင်ထားတဲ့အတွက် စည်းကမ်း
ချက်ကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ချိုးဖောက်ထားတာ ဘယ်သူမှ ငြင်းမရပါဘူး။
ဒါ့အပြင် အဲ့ဒီစည်းကမ်းချက် အမှတ် (၇)ရဲ့ အပိုဒ် (က)မှာပဲ ‘ပထမအဆင့် လုပ်ငန်း
တည်ဆောက်မှုများကို ၃၁-၃-၂၀၁၅ ရက်နေ့အပြီး ဆောင်ရွက်ပြီး ဖွင့်ပွဲအခမ်း
အနား ပြုလုပ် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့မှာ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်ပင်
သာယာရေးကော်မတီနဲ့ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေ မြကျွန်းသာအပန်းဖြေဥယျာဉ်
အတွင်းက မြေငှားရမ်းမှုအတွက် အချက် ၂၄ ချက်ပါ စာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်ရမည်။
မပြီးပါက လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ရုပ်သိမ်းကာ စာချုပ်ကို ဖျက်သိမ်းမည်’ ဆိုပြီး
ဖော်ပြထားပါတယ်။အခု ၂၀၁၅ ခုနှစ် မေလ ၂၇ ရက်နေ့အထိ ရောက်နေပါပြီ။
ခုထိ မပြီးသေးတဲ့အတွက် ပြန်သိမ်းလို့ ရနေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ အခုထိ ဘယ်သူမှ
စည်းကမ်းချက် ၂ ဖြစ်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတဲ့ အပိုဒ်မှာ ‘မြကျွန်းသာ အပန်းဖြေ
ဥယျာဉ်အား နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ သဘာဝဥယျာဉ်ကြီး (Natural Park) အသွင်
သဏ္ဍာန် ဖြစ်စေပြီး အများပြည်သူ အပန်းဖြေနိုင်သည့် Recreation Centre ဖြစ်ရန်၊ အများပြည်သူ လွတ်လပ်စွာ အနားယူနိုင်မည့် Relaxation Centre ဖြစ်စေရန်
ရည်ရွယ်ပါသည်’ ဆိုပြီး ဖော်ပြထားပါတယ်။
အဲ့လို ဖော်ပြထားပြီး အထဲကျတော့ အများပြည်သူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အနားယူတာနဲ့
လည်း မဆိုင် အပန်းဖြေတာနဲ့လည်း မပတ်သက်တဲ့ သုံးထပ်ခွဲရှိတဲ့ ရှော့ပင်း
စင်တာတွေ ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ခွင့်ကို စည်ပင်က ခွင့်ပြုထားတယ်၊ အဲ့ဒီမှာ
တင်စာချုပ်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ခွင့်ပြုပေးတဲ့လုပ်ငန်းက တစ်ခြားစီဖြစ်နေတာ
ဆိုလိုရင်းကတော့ အများပြည်သူ အပန်းဖြေမြေနေရာကို စီးပွားဖြစ် ဈေးဆိုင်ခန်း
တွေပါတဲ့ အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံအဖြစ် လုပ်ကိုင်တဲ့အပြင် စည်းကမ်းတွေ
ကိုပါ ချိုးဖောက်ပြီး လုပ်နေကြတာလို့ ပြောရမှာပါ။
အစိုးရသစ်လက်ထက် ၂၀၁၃ ခုနှစ်ထဲမှာချုပ်တဲ့ မြကျွန်းသာငှားရမ်းတဲ့ စာချုပ်ဟာ
မြေငှားရမ်းခနဲ့ ငှားရမ်းခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ သက်တမ်းစည်းကမ်းချက်နဲ့တင် နိုင်ငံတော်က ကျပ်ဘီလျံပေါင်းများစွာ နစ်နာသွားရတဲ့ စာချုပ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။မြေတစ်
ဧကကို တစ်လ ကျပ် ၁၀ သိန်းနဲ့ ငှားလိုက်တာဖြစ်ပြီး နှစ်ပေါင်း ၆၀ အထိ လုပ်ကိုင်
မြကျွန်းသာနေရာဟာ လက်ရှိအနေအထားမှာ အတင်းထိုးရောင်းရင်တောင်
တစ်စတုရန်းပေ အနည်းဆုံး ပျမ်းမျှ ကျပ် ၄ သိန်းတန်ဖိုး ရှိပါတယ်။ မြေ ၄၄
ဒသမ ၅၁၆ ဧက ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျပ်ဘီလျံ ၈၀၀ နီးပါးအထိ တန်ဖိုးရှိတဲ့
နေရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတောင် လုံးဝအနိမ့်ဆုံးနှုန်းနဲ့ တွက်ထားတဲ့ တန်ဖိုးပါ။
တစ်ဧက ကျပ် ၁၀ သိန်းနဲ့ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ငှားလိုက်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတော်အနေနဲ့
နှစ်ပေါင်း ၆၀ စာ ငှားရမ်းခ စုစုပေါင်းက ကျပ် ၃၂ ဘီလျံကျော်ပဲ ရပါမယ်။ ငှားရမ်းခ
ကို နှစ်တိုင်း ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတောင်းလို့ ရတယ်ထားဦး ကျပ်ဘီလျံ ၅၀ ထက်
နိုင်ငံတော်က ပိုရစရာ မရှိပါဘူး။ နှစ်ပေါင်း ၆၀ လုပ်ကိုင်ခွင့် ဆိုတာကလည်း တစ်သက်လုံးလုပ်ကွာဆိုပြီး အပိုင်ပေးလိုက်တာနဲ့ ဘာမှမကွာပါဘူး။ ဒီတော့
ကျပ်ဘီလျံ အနည်းဆုံး ၈၀၀ နီးပါး တန်ဖိုးရှိတဲ့ မြကျွန်းသာကို ကျပ်ဘီလျံ ၅၀
လောက်နဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေလက်ထဲ ထိုးအပ်လိုက်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတော် ဘယ်လောက်နစ်နာမလဲ တွက်လို့ရမှာပါ။
အများပြည်သူ အပန်းဖြေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေပဲ လုပ်ရမှာမို့ ဒီလောက် ငှားရမ်းခလောက်
ပဲ ယူတယ်ဆိုရင်လည်း ရှော့ပင်းစင်တာလို စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်းမျိုး ခွင့်ပြုဖို့ မလို
ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အခုတည်ဆောက်နေတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်သုံးဦးက နိုင်ငံတော်ကို
ကျတော့ အပန်းဖြေတဲ့ လုပ်ငန်းအတွက်လောက်ပဲ ငှားခပေးတယ်၊ လုပ်တော့ စီးပွားဖြစ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံပါ။
မြကျွန်းသာ မြေနေရာကို အခုလို စီးပွားဖြစ် လုပ်မယ်ဆိုရင် ဒီငှားရမ်းခနဲ့ မရပါဘူး။
တစ်ဧကကို အနည်းဆုံး ကျပ်သိန်း ၁၀၀ နဲ့အထက် ငှားရမ်းခရမှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲ
ဆိုတော့ မြကျွန်းသာရှေ့မှာ လုပ်နေတဲ့ ဗီယက်နမ်က Hoang Anh Gia Lai ရင်းနှီး
မြှုပ်နှံထားတဲ့ နေရာဟာ တစ်စတုရန်း မီတာကို အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၂၀ ၀န်းကျင် ငှားရမ်းခပေးရတာကို ကြည့်ရုံနဲ့ သိနိုင်တယ်။
အခုလို မြကျွန်းသာမှာ တစ်ဧကကို တစ်လ ငွေကျပ် ၁၀ သိန်းနဲ့ ငှားရမ်းခွင့်ပေးတဲ့
အပေါ်၊ စာချုပ် ပြန်ပြင်ချုပ်တဲ့အပေါ် သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီနဲ့ စည်ပင်အကြား
အဂတိလိုက်စားမှု ဘယ်လောက်ရှိလဲ ဆိုတာကို မဖြစ်မနေ စစ်ဆေးဖို့ လိုပါတယ်။
မြကျွန်းသာကို စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး အပိုင်းလိုက်ပေးတော့ Magic Land၊ MGS၊
GSB၊ Inya Palace၊ နေလပွင့်၊ ရူဂျီ၊ မက်စ်မြန်မာနဲ့ ဧဒင်ကုမ္ပဏီ ရှစ်ခုက အပိုင်း
လိုက်ခွဲပြီး လုပ်ကိုင်ခွင့် ရခဲ့ကြပါတယ်။
ဧဒင်အုပ်စုကုမ္ပဏီရဲ့ တာဝန်ရှိသူကတော့ လက်ရှိ သူတို့လုပ်ကိုင်ခွင့်ရထားတဲ့ အပိုင်း
မှာ အများပြည်သူ အပန်းဖြေခြင်း၊ အနားယူခြင်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းကလွဲပြီး
အခုလို အများပြည်သူ အပန်းဖြေမှု၊ အနားယူမှုနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ ရှော့ပင်းစင်တာ
လို စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်းတွေ လုံးဝလုပ်ဖို့ မရှိဘူးလို့ တရားဝင် ထုတ်ဖော်ပြောပါတယ်။
အကယ်၍ စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်းတွေ လုပ်မိတယ်လို့ အများပြည်သူက ဆုံးဖြတ်ရင် သူတို့လုပ်ကိုင်ခွင့်ရထားတဲ့ အပိုင်းကို ပြန်သိမ်းယူနိုင်တယ်လို့တောင် ထုတ်ဖော်
ဒီလိုပဲ မက်စ်မြန်မာကုမ္ပဏီ တာဝန်ရှိသူကို မေးမြန်းတဲ့အခါမှာလဲ သူတို့အနေနဲ့ သူတို့လုပ်ကိုင်ခွင့်ရတဲ့ အပိုင်းမှာ ကလေးကစားကွင်း၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ပြခန်း
လိုမျိုး အများပြည်သူ အပန်းဖြေခြင်း၊ အနားယူခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းပဲလုပ်ဖို့
စည်ပင်ကို တင်ပြမှာဖြစ်တယ်၊ အခုလို ရှော့ပင်းစင်တာတွေပါတဲ့ စီးပွားဖြစ်
လုပ်ငန်းမျိုး၊ အများပြည်သူ အပန်းဖြေမှုနဲ့ လုံးဝမသက်ဆိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းမျိုးတွေ
မက်စ်မြန်မာကုမ္ပဏီ အနေနဲ့ မြကျွန်းသာကို Green Zone အဖြစ် အများပြည်သူ အပန်းဖြေဖို့သက်သက် လုပ်ငန်းတွေပဲလုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်
တယ်၊ အများပြည်သူအမြင်မှာ မြင်ခဲ့ရင်၊ အများပြည်သူက ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ရင်
အများပြည်သူ ဆန္ဒအတိုင်း လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ချက်ခြင်းပြန်သိမ်းပေးမယ်လို့
လက်ရှိ ရှော့ပင်းစင်တာပါတဲ့ အထပ်မြင့်တွေ တည်ဆောက်နေတာက Inya
Palace ကုမ္ပဏီနဲ့ Magic Land ကုမ္ပဏီတို့ ရထားတဲ့အပိုင်းမှာ အများစု တည်
ဆောက်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။Inya Palace ကုမ္ပဏီက MGW ဦးဝင်းအောင်
နဲ့ ဆက်စပ်ပတ်သက်တဲ့ ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါတယ်။ MGW ကုမ္ပဏီဟာ စီမံကိန်း
ပေါင်းများစွာ တည်ဆောက်ခွင့်ရထားတဲ့ ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါတယ်။
Diamond Inya Palace ကွန်ဒိုစီမံကိန်း၊ ပါရမီလမ်းပေါ်မှာ အထပ်မြင့် Diamond
Parami Business Centre စီမံကိန်း၊ ဖိုးစိန်လမ်းပေါ်မှာ Garden Kandawgyi
Tower အမည်ဖြင့် ၂၇ ထပ်အမြင့်ရှိ တာဝါတစ်ခုနှင့် ၂၁ ထပ်အမြင့်ရှိ တာဝါ
စီမံကိန်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် ဆရာစံလမ်းပေါ်မှာ ၂၂ ထပ်အမြင့်ရှိသော Yankin
Condominium စီမံကိန်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ် ငါးထပ်ကြီးဘုရားအနီးမှာ Bahan
Servic Apartment အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်း၊
မန္တလေးမှာ MGW Inter Continental Hotel အမည်ဖြင့် အထပ်မြင့်ဟိုတယ်
စီမံကိန်း၊ ပုဂံဗူးဘုရားအနီးက မြေ ၁၀ ဧက၀န်းကျင်ပေါ်မှာ အခန်း ၂၅၀ ပါ
MGW INDIGO Resort (Bagan) စီမံကိန်းတွေကို တည်ဆောက်လုပ်ကိုင်ခွင့်
MGW ဟာ ငွေကြေးပမာဏ မြောက်များစွာ မြှုပ်နှံရမယ့် စီမံကိန်းပေါင်းများစွာ လုပ်ခွင့်ရထားပေမယ့် ထိပ်တန်းအခွန်ဆောင်တဲ့ စာရင်းမှာတော့ အခုနောက်ဆုံး ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ အခွန်အများဆုံး ပေးဆောင်သူ ၁၀၀၀ ဦးစာရင်းထဲမှာတောင်
မြကျွန်းသာထဲမှာ စီးပွားဖြစ်အဆောက်အအုံ နောက်ထပ် တည်ဆောက်နေတဲ့
ဒေါက်တာကျော်ဝင်းရဲ့ Magic Land ကုမ္ပဏီ ဆိုတာလည်း အခု နောက်ဆုံး
ထုတ်ပြန်တဲ့ ထိပ်တန်းအခွန်ထမ်း ၁၀၀၀ ဦး စာရင်းမှာတောင် ပါမလာတဲ့
ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါတယ်။ Magic Land ဒေါက်တာကျော်ဝင်းဆိုတာ Game City
လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Magic Land ကုမ္ပဏီဟာ
မြကျွန်းသာထဲမှာ မြေနေရာ ၁၃ ဧကကျော်နဲ့ အများဆုံးရထားတဲ့ ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး အကွက်အကွင်း အကောင်းဆုံးနေရာကို ရထားတဲ့ ကုမ္ပဏီပါ။ ဆိုလိုတာကတော့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေသာ ရယူခဲ့ကြတယ် နိုင်ငံအတွက် အခွန်ပြန်ပေးတဲ့ အပိုင်း
မှာတော့ ထိပ်တန်းမှာ ရှိမနေခဲ့ပါဘူး။
သာမန်မြေဖို့တာ မဟုတ်ပဲ ကန်ရေပြင်ပေါ်ကို ပေါ်ပေါ်တင်တင် မြေချဲ့ထွင်တာကို
မသိတာလား၊ သိသိနဲ့ ခွင့်ပြုလိုက်သလား၊ ဘာကြောင့် အရေးမယူတာလဲ။ ဓာတ်ပုံအထောက်အထားတွေက ငြင်းလို့ မရပါဘူး။နောက်ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ
၃၁ ရက်နေ့ အပြီးမသတ်ရင် လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းမယ်ဆိုပြီး အခုဘာကြောင့် ပြန်မသိမ်း
အရင်အစိုးရ လက်ထက်တုန်းက နှစ် ၃၀ လောက်ပဲ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးတာကို အစိုးရ
သစ်လက်ထက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် စာချုပ်ပြန်ပြင်ချုပ်တဲ့အခါ ဘာကြောင့် နှစ် ၆၀ အထိ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲ။ ဘယ်သူ့အမိန့်နဲ့ ပေးတာလဲ။
အများပြည်သူ အပန်းဖြေ၊ အနားယူမှုနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်း လုပ်ရမယ်လို့ ရည်ရွယ်
ထားပြီး ဘာကြောင့် အနားယူ အပန်းဖြေခြင်းနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ အခုလို အထပ်မြင့်
ရှော့ပင်းစင်တာ တည်ဆောက်လုပ်ကိုင်ခွင့် ပေးခဲ့ကြသလဲ။
ဒီလို လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးတာ၊ ဒီလိုအချက်တွေနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုတာကို ရန်ကုန်တိုင်း
ဒေသကြီးလွှတ်တော်ကို တင်ပြခဲ့သလား၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဆီ တင်ပြ
ခဲ့သလား၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို တင်ပြခဲ့သလား၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
ကော်မရှင်ကို တင်ပြခဲ့သလား၊ နောက်ဆုံး နိုင်ငံတော်သမ္မတဆီ တင်ပြပြီးမှ
နှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ ချုပ်ခဲ့တာ၊ ပေးခဲ့တာ၊ လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်း
ရမယ့် စည်းကမ်းချိုးဖောက်မှုတွေရှိလျက်နဲ့ အခုလိုအရေးယူရမှာမယူပဲ မျက်ကွယ်
ပြုထားတာဆိုရင်တော့ အဂတိလိုက်စားထားတဲ့ သဘောသက်ရောက်သွား
ဒါဆိုရင်တော့ မြကျွန်းသာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး စည်ပင်က တစ်ခြားအများ
ပြည်သူ အပန်းဖြေရမယ့်နေရာတွေ၊ အများပြည်သူပိုင်မြေတွေကို ဘယ်လိုပေး
ထားသလဲဆိုတာကိုပါ အားလုံးကိုပြန်ပြီးချ ပြရမှာပါ။ ချမပြဘူးဆိုရင်တော့ အဂတိတရားမကင်းလို့ နိုင်ငံတော်နစ်နာအောင်လုပ်ထားလို့လို့ အားလုံးက
သတ်မှတ်ကြမှာပါ။ သမ္မတအနေနဲ့ရော အခုလို ပေးလိုက်ကမ်းလိုက် လုပ်နေ
ဦးရဲထွဋ်ခင်ဗျာ။ အရင်အစိုးရလက်ထက်နဲ့ အခုအစိုးရလက်ထက်မှာ ဘာထူးသွားလဲ
ဆိုတာ မြကျွန်းသာကိစ္စက သက်သေတစ်ခုပါပဲ။အရင်အစိုးရလက်ထက်နဲ့ အခု
အစိုးရလက်ထက် ဘာထူးသွားသလဲဆိုတာကတော့ အရင်အစိုးရလက်ထက်
စာချုပ်မှုနဲ့ အခုအစိုးရလက်ထက်စာချုပ်ကပဲ သက်သေခံနေပါတယ်။အရင်အစိုးရ
လက်ထက်မှာချုပ်ဆိုခဲ့တုန်းက နှစ်၃၀လောက်ပဲ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်၊ ဒီအစိုးရ
လက်ထက်မှာ ပြန်ပြင်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါ နှစ် ၆၀ အထိတိုးပေးလိုက်တယ်။
အရင်အစိုးရလက်ထက်မှာချပေးတုန်းက ကုမ္ပဏီအားလုံးက အများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့
အပန်းဖြေ၊ အနားယူတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့အတွက်ပဲယူကြတယ်၊ အခုအစိုးရလက်ထက်
မှာတော့ အများပြည်သူအပန်းဖြေမှု အနားယူမှုနဲ့မဆိုင်တဲ့ ရှော့ပင်းစင်တာပါတဲ့ အဆောက်အအုံတွေ တည်ဆောက်ခွင့်ကို စည်ပင်ကိုယ်တိုင်က တရားဝင်ထည့်သွင်း
စာချုပ်ချုပ်ဆိုပေးပြီး လုပ်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါကိုကြည့်တာနဲ့တင် အများပြည်သူပိုင်
နေရာတွေကို ပုဂ္ဂလိကကိုချထားပေးတဲ့နေရာမှာ အရင်အစိုးရလက်ထက်က ထက်
အခုအစိုးရလက်ထက်မှာ ခွင့်ပြုပေးတာတွေက ပိုတောင်ဆိုးသွားတယ်လို့ ပြောရမလို
ရေကူးအသံလွှင့် စက်ရုံတင်ဒါကိစ္စ၊ မြကျွန်းသာကိစ္စတွေပေါ်လာတဲ့အခါ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အစိုးရအဖွဲ့စတင်ချိန်မှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ပြောခဲ့တဲ့ ကတိပြုမိန့်ခွန်းတွေကို ပြန်
သတိရပါတယ်။အခုပေါ်ပေါက်နေတဲ့ အခြေအနေတွေက သမ္မတကြီးမိန့်ခွန်းမှာပါတဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ကွဲပြီး ဘယ်လောက်တောင်ဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာ ဦးရဲထွဋ်ကပဲ
သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာ သူ့ရဲ့ပထမဆုံးမိန့်ခွန်းမှာ နိုင်ငံ့စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာ အခွင့်ထူးခံ
တွေ လက်ဝါးကြီးအုပ်ခြယ်လှယ်တာမျိုးမဖြစ်အောင် လုပ်သွားမယ်လို့ ပြောခဲ့ဖူး
ပါတယ်။၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မတ် ၃၀ ရက်မှာပြုလုပ်တဲ့ ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စု
လွှတ်တော် ပထမအကြိမ်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ပြောခဲ့တာပါ။
"ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ အစိုးရက အတိုင်းအတာတစ်ရပ်အထိ ထိန်းသိမ်း
ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်မျိုးကို ရည်မှန်းပါတယ်။ ၀င်ထိန်း
ပေးမယ်ဆိုတာလည်း ဈေးကွက်ရဲ့လွတ်လပ်မှုကို ထိန်းချုပ်လိုတဲ့သဘောမျိုး
မဟုတ်ဘဲ အရင်းရှင်၊ ဓနရှင်ကြီးများ၊ အခွင့်ထူးခံများက လက်ဝါးကြီးအုပ်ခြယ်
လှယ်တာမျိုးမဖြစ်အောင် ထိန်းကျောင်းတည့်မတ်ပေးတာမျိုးကိုသာ ရည်ရွယ်
ပါတယ်" လို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ၂၀၁၁ ခုနှစ် မေ ၃၁ ရက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ခမ်းမမှာပြုလုပ်တဲ့ မိန့်ခွန်းနာခံခြင်းနဲ့ ကတိသစ္စာပြုခြင်း အခမ်းအနားမှာလည်း သမ္မတဦးသိန်းစိန်က သန့်ရှင်းတဲ့အစိုးရ (Clean Government) ဖြစ်ဖို့ အဂတိတရားကင်းရှင်းဖို့လိုကြောင်း၊ မိမိအပေါင်းအသင်းရောင်းရင်းတွေဖြစ်လို့ အခွင့်အရေးပိုပေးတာမျိုးတွေ၊ ဆွေမျိုး
သားချင်းတွေဖြစ်လို့ အခွင့်အလမ်းပိုမိုဖန်တီးပေးတာမျိုးတွေ မလုပ်မိဖို့ အရေးကြီး
"မိမိတို့အစိုးရဟာ အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့ (Good Governance) အစိုးရ
ကောင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ရပါမယ်။ သန့်ရှင်းတဲ့ (Clean Government) အစိုးရဖြစ်ဖို့
လိုပါတယ်။ အစိုးရကောင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ဖို့အတွက် စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းဖို့လိုပါတယ်။ အုပ်ချုပ်မှုကောင်းဖို့လိုပါတယ်။ ပြည်သူတွေအပေါ် စေတနာထားရပါမယ်။ ပြည်သူ
ရဲ့အကျိုးစီးပွားကို အကာအကွယ်ပေးရပါမယ်။ ပြည်သူကို အလုပ်အကျွေးပြုကြ
ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းတဲ့ (Clean Government) ဖြစ်ဖို့အတွက်တော့ အဂတိတရားကင်းရှင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူခြင်းဟာ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်စေခြင်းကြောင့် မိမိကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ မိမိတာဝန်ယူရတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလည်းကောင်း ကင်းကင်းရှင်းရှင်းရှိအောင် ထိန်းကျောင်းကြပ်မတ်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ကအပ်နှင်းထားတဲ့
လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို တလွဲအသုံးချပြီး မိမိအပေါင်းအသင်းရောင်းရင်းတွေဖြစ်လို့ အခွင့်
အရေးပိုပေးတာတွေ၊ မိမိရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေဖြစ်လို့ အခွင့်အလမ်းတွေ ပိုပြီး
မှသန့်ရှင်းတဲ့ (Clean Government) အဖြစ် မှတ်ကျောက်တင်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်"
လို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ပြောခဲ့ပါတယ်။
သမ္မတကြီးက ဒီလိုပြောခဲ့ပေမယ့် ဦးရဲထွဋ်တို့ အစိုးရသက်တမ်း လေးနှစ်တာ
ကာလအတွင်းမှာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာ မေးခွန်း
ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ နိုင်ငံပေါင်းနှစ်ရာကျော်ရဲ့ နှစ်ပေါင်းရာချီတဲ့သက်တမ်းအတွင်းမှာ ဘယ်အစိုးရကမှ ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာလုပ်ငန်းတစ်ခုကို မီဒီယာဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့
ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာထဲကနေ ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀ အနစ်နာခံပြီး ကူညီခဲ့ဖူးတာရှိသလဲ။
အခုမြကျွန်းသာကိစ္စမှာလည်း ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာဆုံးရှုံးမှုဟာ နှစ် ၆၀ မှာ ဒေါ်လာ
သန်း ၃၀၀ တောင်မကပါဘူး။ ခရိုနီစီးပွားရေးစနစ်တွေ ရှင်သန်နေတယ်။ အဂတိ
လိုက်စားမှုတွေ ပိုများလာတယ်။ ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့်
ငွေကြေးဖောင်းပွမှုတွေ၊ စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကနေ လူထုက စီးပွားရေး
စီးပွားရေးဆိုးဝါးမှုကြောင့် မကျေမနပ်ဖြစ်မှုတွေ၊ အဲဒီကနေ နိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်မှု
ကတစ်ဆင့် လာဘ်စား၊ စီးပွားဖြစ်သူ၊ အကျင့်ပျက်အရာရှိတွေ၊ ခရိုနီတွေက သူတို့ရဲ့
အပြစ်တွေကိုပျောက်ချင်လို့ ငါးတကာယိုတဲ့ချီး၊ နောက်ဆုံး တပ်မတော်အပေါ်
ပုံချလိုက်မှာကို လူထုကစိုးရိမ်နေပါတယ် ဦးရဲထွဋ်ခင်ဗျာ။
ဒါကြောင့် ရေကူးအသံလွှင့်စက်ရုံကိစ္စနဲ့ မြကျွန်းသာကိစ္စတွေဟာ ရပ်ဆိုင်းရုံတင်
မကဘဲ နိုင်ငံတကာမှာလို စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး ဥပကြောင်းနဲ့ပါ အရေးယူပေးပါလို့
လူသန်းပေါင်း ၅၀ ကျော်ကို သက်သေထားလို့ တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
(Green Zone ၊ Relaxation Zone အဖြစ် ပုဂ္ဂလိကများအား ၂၀+၅+၅ (နှစ် ၃၀) အငှားချစာချုပ်အား ယခုအစိုးရလက်ထက်၌ ၄၅+၅+၅+၅ (နှစ် ၆၀) စာချုပ်
ပြင်ဆင်ချုပ်ဆိုကာ တစ်ဧက ၁၀ သိန်း (ပြင်ပပေါက်ဈေး မတန်တဆ လျှော
နည်းသောဈေး) ဖြင့် ငှားရမ်းထားသော မြကျွန်းသာဥယျာဉ်အား စီးပွားဖြစ်
အဆောက်အဦးများ ဆောက်လုပ်မှုကြောင့် ၀န်းကျင်အလှ ပျက်ပြားနေသည့်
မြင်ကွင်းများ နှင့် မြကျွန်းသာ အပန်းဖြေဥယျာဉ်မြေနေရာ ငှားရမ်းခြင်း သဘောတူ
Written by : မာန်သူရှိန်
ဓာတ်ပုံနှင့်သတင်း - အောင်ရဲကို၊ အောင်မျိုးသန့်
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/31/20150အကြံပြုခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံသည် အာရှ၏ ဘုံကျွန် မဟုတ်၊ အမှိုက်ပုံ မဟုတ် . . .
Written by - နေထွန်းနိုင်
အရှေ့တောင် အာရှ ပင်လယ်ပြင် (အထူးသဖြင့် အက်ဒမန်ပင်လယ်နဲ့ မလက္ကာ ရေလက်ကြား) မှာ ပိတ်မိနေတဲ့ လှေစီးပြေး ဒုက္ခသည် အရေး ဖြစ်လာချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် အပြစ် ပုံချခဲ့ပါတယ်။
လူကုန် ကူးသူတွေနဲ့ လူမှောင်ခိုတွေဟာ အရှေ့တောင် အာရှ ပင်လယ်ပြင် ရေလမ်းကြောင်းကို အသုံးပြုနေတာ ကြာပါပြီ။ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ တစ်ခုချင်းစီ အလိုက် အနည်းနဲ့အများ လျစ်လျူ ရှုထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မေလဆန်းမှာ လူမဆန်တဲ့ ရက်စက်မှုတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါ ဒါကို အာရုံစိုက်ခဲ့ပါတယ်။
အမှန်တော့ အရှေ့တောင် အာရှ ပင်လယ်ပြင်က လှေစီးပြေး ဒုက္ခသည် အများစုဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ဘင်္ဂါလီတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလူတွေထဲမှာ မြန်မာက လူတွေ ပါရင်တောင် အခု စွပ်စွဲနေသလောက် မများပါဘူး။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကလည်း လှေစီးပြေး ဒုက္ခသည် အများစုဟာ သူတို့ နိုင်ငံက ဖြစ်တယ် ဆိုတာ ၀န်ခံပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားကလည်း အများစုက မြန်မာက လာသူတွေ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ထုတ်ပြောပါတယ်။
ဒါတွေ ရှိနေပါလျက် မြန်မာကို ဘာကြောင့် အပြစ်ပုံချကြတာလဲ။ ဒီနောက်ကွယ်မှာ နိုင်ငံရေး လှည့်ကွက်တွေ ရှိနေပါတယ်။
■ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ မြန်မာ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဟာ မြန်မာရဲ့ အနောက်ဘက်မှာ ရှိပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ ထိစပ်ပါတယ်။
နတ်မြစ် အပါအ၀င် ကုန်းမြေ ဆက်စပ်မှု ၁၆၈ ဒသမ ၇ မိုင် (၂၇၁ ကီလိုမီတာ) အရှည်အလျား နယ်နိမိတ် ထိစပ်မှုရှိပါတယ်။ နတ်မြစ်ရိုးနဲ့ ထိစပ်နေမှုက ၃၉ ဒသမ ၅ မိုင်ရှိပြီး ကုန်းတွင်း ထိစပ်မှုက ၁၂၉ ဒသမ ၂ မိုင် ရှိပါတယ်။
နိုင်ငံ အကျယ်အ၀န်းက မြန်မာထက် ငယ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးရဲ့ နယ်မြေ အကျယ်အ၀န်း စာရင်းမှာ မြန်မာက အဆင့် ၄၀ ရှိ ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက အဆင့် ၉၄ ရှိပါတယ်။
လူဦးရေ ပမာဏမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက မြန်မာထက် သာပါတယ်။ တရားဝင် အချက်အလက်တွေ အရ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူဦးရေ ၅၁ သန်းကျော်ပဲ ရှိပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ ၁၅၈ သန်း ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ အများဆုံး နိုင်ငံများ စာရင်းမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက နံပါတ်ရှစ် နေရာမှာ ရှိပါတယ်။ မြန်မာက နံပါတ် ၂၅ နေရာမှာ ရှိပါတယ်။
လူဦးရေ သိပ်သည်းဆမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက မြန်မာထက် ပိုများပါတယ်။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ သိပ်သည်းဆ နိုင်ငံများ စာရင်းမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက နံပါတ် ၁၂ နေရာမှာ ရှိပါတယ်။ မြန်မာက ၁၂၅ မှာ ရှိပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လူဦးရေ ပမာဏက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ တစ်ဟုန်ထိုး ဖြစ်နေပါတယ်။
၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရဲ့ လူဦးရေဟာ ၆၆ သန်း ကျော်ရှိပါတယ်။ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်မှာ ၈၂ သန်းကျော်၊ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်မှာ ၁၀၂ သန်းကျော် ဖြစ်လာပြီး ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှာ ၁၃၂ သန်းကျော် ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှာ ၁၅၁ သန်းကျော် ဖြစ်လာရာက ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ ၁၅၈ သန်းကို ရောက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာ နှစ်အလိုက် လူဦးရေတိုးနှုန်း (Year Population Growth Rate) ကျဆင်း နေရာကနေ ၂၀၁၀ ပြည့် အလွန်မှာ ပြန်တက်လာပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရဲ့ နှစ်အလိုက် လူဦးရေ တိုးနှုန်းက ၁၉၆၇ ခုနှစ်မှာ အများဆုံး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ ၁ ဒသမ ၂၂ ရာခိုင်နှုန်း ပြန်ရောက်ပါတယ်။
လူတစ်ဦးချင်းရဲ့ နှစ် အလိုက်ဝင်ငွေမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက မြန်မာထက် နည်းခဲ့ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ (UN) က ထုတ်ပြန်တဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ် စာရင်း အရ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ လူတစ်ဦးချင်း တစ်နှစ် ပျှမ်းမျှ ၀င်ငွေဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၈၀ ပဲရှိပါတယ်။ ဒီထက် ပိုနည်း နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူတစ်ဦးချင်း တစ်နှစ် ပျှမ်းမျှဝင်ငွေက အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၁၈၃ ရှိပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် လူဦးရေနဲ့ ချိန်ထိုးတဲ့ ဆင်းရဲ နွမ်းပါးမှုနှုန်းက ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှာ ၅၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ ရာခိုင်နှုန်း ၄၀ ရှိနေပြီး ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှာ ၃၁ ရာခိုင်နှုန်း ရှိတယ်လို့ UN က ပြောထားပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ် အချက်အလက်တွေ အရ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရဲ့ ဆင်းရဲ နွမ်းပါးမှုနှုန်းဟာ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှာ ၄၃ ဒသမ ၃ ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံက လျှော့ချဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ဆင်းရဲ နွမ်းပါးမှုနှုန်း ၂၆ ရာခိုင်နှုန်းအောက် ပမာဏကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် မရောက်သေးဘူး၊ မြန်မာထက် ဆင်းရဲတဲ့သူ ပိုများနေတာပါ။
■ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဒုက္ခသည် အရေး
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရဲ့ အကြီးမားဆုံး နောက်ထပ် ပြဿနာတစ်ခုက နိုင်ငံတွင်း ဒုက္ခသည် အရေအတွက် များပြားနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၇၁ ခုနှစ်မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဟာ ပါကစ္စတန်က ခွဲထွက်ပြီး သီးခြား လွတ်လပ်တဲ့ နိုင်ငံ ဖြစ်လာပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေး မရခင် အချိန်မှာ အရှေ့ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် မဖြစ်လာခင်မှာ အရှေ့ ပါကစ္စတန်နဲ့ အနောက် ပါကစ္စတန်အကြား စစ်ပွဲ ဆင်နွှဲမှု ရှိခဲ့ပြီး လူမျိုးသုဉ်း သတ်ဖြတ်မှုတွေပါ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အနည်းဆုံး သန်း ဂဏန်းအထိ သေဆုံး သတ်ဖြတ် ခံရပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံထဲ ပြေးဝင်ခိုလှုံခဲ့သူ အရေအတွက် တစ်သန်းကျော် ရှိခဲ့ပါတယ်။ စစ်ပြီးတဲ့အခါ အဲဒီသူတွေထဲက သိန်းဂဏန်းကို အိန္ဒိယက ပြန်ပို့ပါတယ်။ ဒါကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရက ဒုက္ခသည်အဖြစ် ထားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ ဒုက္ခသည်တွေကို မဲပေးခိုင်းတဲ့ နေရာမှာ အသုံးပြုခဲ့ပေမယ့် နိုင်ငံသား အခွင့်အရေး မပေးခဲ့ပါဘူး။ သူတို့ကလည်း နိုင်ငံသားဖြစ် ခွင့်ရဖို့ အခုထိ တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဂျနီဖာအ ခြေစိုက် Internal Displacement Monitoring Center (IDMC) က ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ အချက်အလက်တွေ အရ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ အထိ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံမှာ IDPs ဒုက္ခသည် ၄၃၁၀၀၀ ကျော်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သဘာဝ ဘေးဒဏ်ကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ ဒုက္ခသည် အရေအတွက်က ၂၀၁၃ ခုနှစ်အထိ ရရှိတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေ အရ တစ်သန်းကျော် ရှိတယ်လို့ သူတို့က ဆိုပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ လူသားချင်း စာနာမှု အကူအညီ ပေးနေတဲ့သူတွေရဲ့ ပြောကြားချက်အရ ဒုက္ခသည် စခန်းပေါင်း ၁၅၀ ကျော်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒုက္ခသည်တွေ အပြင် အိမ်ခြေ ယာမဲ့တွေကလည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်နေပါတယ်။
Plan International အဖွဲ့က စီစဉ် ရိုက်ကူးတဲ့ DHAKA DREAM:Street Children in Dhaka မှတ်တမ်း ဗီဒီယိုမှာ ဒီအချက်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ကိန်းဂဏန်းတွေ အရ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ မြို့တော် ဒါကာမှာ အိမ်ခြေယာမဲ့ လမ်းပေါ်ကလေး ၆၈၀၀၀၀ ကျော်ရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ ၁ ဒသမ ၁ သန်း ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီထဲက ရာခိုင်နှုန်း ၈၀ ကျော်ဟာ ယောက်ျားလေးတွေ ဖြစ်ပြီး ထက်ဝက် နီးပါးဟာ အသက် ၁၀ နှစ်အောက် ကလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အဓမ္မခေါင်းပုံဖြတ် စေခိုင်းသူတွေနဲ့ လူကုန် ကူးသူတွေရဲ့ အဓိကပစ်မှတ် ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒါဟာ မြို့တော်ဒါကာ တစ်ခုတည်းမှာပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ကျန်တဲ့ ဒေသတွေ အပါအ၀င် တစ်နိုင်ငံလုံး ဆိုရင် ပိုများနိုင်ပါတယ်။
■ နေရပ် စွန့်ခွာသူများ ဦးတည်ရာ
အရှေ့တောင် အာရှ ပင်လယ်ပြင်မှာ လူကုန်ကူး ခံရသူတွေထဲမှာ ဘင်္ဂါလီတွေ ဘာကြောင့်များသလဲ ဆိုတာ အဖြေရှိပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ
(၁) ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေ ထဲကဖြစ်လာတဲ့ စစ်ပြေး ဒုက္ခသည် အရေးကို လုံးဝ မဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ ဒုက္ခသည်တွေဟာ သူတို့က ပါကစ္စတန်လား၊ ဘင်္ဂါလားဒေ့ရ်ှလားဆိုတာ ဝေခွဲမရ ဖြစ်နေဆဲပါ။
(၂) လူဦးရေ တိုးပွားနှုန်းကို မထိန်းချုပ် နိုင်သေးပါဘူး။ ဆင်းရဲ မွဲတေမှုနှုန်း မြင့်မားနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) ဒါကာမှာတင် အိမ်ခြေယာမဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ ကလေး ၁ ဒသမ ၁ သန်းကျော် ရှိနေပါတယ်။ နိုင်ငံအနှံ့ အိမ်ခြေယာမဲ့ သန်းချီ ထပ်ရှိနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရာသီဥတု သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ဘ၀ပျက်သူ သန်းချီလည်း ရှိနေကြပါတယ်။
ဒီအချက် သုံးချက်မှာ အကျုံး ၀င်သူတွေရဲ့ ထွက်ပေါက်က နေရပ် စွန့်ခွာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို စွန့်ခွာတဲ့အခါ တရားမ၀င် လမ်းကြောင်းကို အသုံးပြုပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ နိုင်ငံ စွန့်ခွာသူအများစု ဦးတည်တာက မလေးရှားနိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နည်းတူ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံက လူတွေလည်း ရေကြောင်းလမ်း အသုံးပြုပြီး တရားမ၀င် နိုင်ငံ ဖြတ်ကျော်မှုကို လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့ ဦးတည်တာက သြစတြေးလျ နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ကြားခံ နိုင်ငံမထားဘဲ ရေလမ်းက တစ်ဆင့် တိုက်ရိုက် ခိုးဝင်ဖို့ ကြိုးစားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက သီရိလင်္ကာလို မဟုတ်ပါဘူး။
သူတို့ ခိုးဝင် ကျော်ဖြတ်တဲ့ လမ်းကြောင်းက မြန်မာနိုင်ငံ၊ အဲဒီက တစ်ဆင့် ထိုင်းနိုင်ငံကို ကျော်ပြီး ပထမ ပစ်မှတ်ဖြစ်တဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံကို သွားပါတယ်။ တချို့ကလည်း မလေးရှားက တစ်ဆင့် အင်ဒိုနီးရှားကို ခိုးဝင်ပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားကို တိုက်ရိုက် ခိုးဝင်ဖို့ ကြိုးစားသူတွေ ရှိသလို သြစတြေးလျကို ခိုးဝင်ဖို့ ကြိုးစား သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
အရှေ့တောင် အာရှ ပင်လယ်ပြင်အတွင်း တွေ့ရှိခဲ့ရ သူတွေဟာ မလေးရှားနဲ့ အင်ဒိုနီးရှားကို ခိုးဝင်ဖို့ ကြိုစားသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ နှစ်နိုင်ငံဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတူ နိုင်ငံတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေ မလေးရှားနိုင်ငံကို တရားမ၀င် ၀င်ရောက်ဖို့ ကြိုးစားရင်လည်း ဘင်္ဂါလီတွေ အသုံးပြုတဲ့ မြန်မာ - ထိုင်းတောင်ပိုင်း - မလေးရှား လမ်းကြောင်းကိုပဲ သုံးလေ့ ရှိပါတယ်။ မလေးရှား နိုင်ငံထဲ ရောက်နေတဲ့ တရားမ၀င် မြန်မာ အလုပ်သမား အများစုဟာ လူကုန် ကူးသူတွေ၊ လူမှောင်ခို သမားတွေကို ငွေပေးပြီး ထိုင်း တောင်ပိုင်းက တစ်ဆင့် မလေးရှားကို အသွားအပြန် လုပ်နေသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူတိုနဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေကို အတူတူပဲလို့ သတ်မှတ်လို့ မရပါဘူး။ အကြီးမားဆုံး ယိုစိမ့်မှုက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက လာတာပါ။ အဲဒီ ယိုစိမ့်မှုဒဏ် ခံရသူတွေထဲမှာ မြန်မာလည်း တစ်နိုင်ငံ အနေနဲ့ ပါဝင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒေသတွင်း နိုင်ငံတွေ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာရဲ့ တုံ့ပြန်မှုက ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ ပထမ အချက် အနေနဲ့ လှေစီး ဒုက္ခသည် အားလုံးကို မစိစစ်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံက လာသူတွေလို့ ပြောပါတယ်။ ဒီလို ပြောတဲ့အခါ မြန်မာ တိုင်းရင်းသား လုံးဝ မဟုတ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာ အသုံးအနှုန်းကို သုံးစွဲပါတယ်။ စိစစ်မှုတွေ လုပ်ပြီးချိန်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ကိုယ်တိုင်က သူတို့ လူတွေပါလို့ ထုတ်ပြောချိန်မှာလည်း လျှော့မသွားပါဘူး။ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ အရေးကိုပဲ ထပ်ပြီး ဖိအားပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ နိုင်ငံတကာ မီဒီယာတွေ ကလည်း ပြဿနာရဲ့ အဓိက ရင်းမြစ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို မပြောဘဲ ဖုံးကွယ်ပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ ရှိတဲ့ ဒုက္ခသည် သန်းချီ အရေးကို နှုတ်ဆိတ်နေပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရှိတဲ့ ဒုက္ခသည် သိန်းဂဏန်းကို လက်ညှိုးထိုး ပြောဆိုနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
■ အရင်ကတည်းက ရှိခဲ့
အရှေ့တောင် အာရှ ပင်လယ်ပြင် အတွင်းက လှေစီး ဒုက္ခသည်ဆိုတာ ရုတ်တရက် ပေါ်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များ မဟာမင်းကြီးရုံး (UNHCR) က ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ အချက်အလက်တွေအရ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ထဲမှာ ခန့်မှန်းခြေ လူဦးရေ ၆၃၀၀၀ ကျော်ဟာ အရှေ့တောင် အာရှ ပင်လယ်ပြင်ကို ဖြတ်ပြီး တရားမ၀င် သွားလာမှုတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ UNHCR ကတော့ ဒီလူတွေဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ မြန်မာကလို့ ပြောပါတယ်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် ကိန်းဂဏန်းတွေ အရပဲ လူဦးရေ ၆၃၀၀၀ ကျော်ထဲမှာ လူ ၇၅၀ လောက် သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ လူကုန် ကူးသူတွေနဲ့ လူမှောင်ခို သမားတွေရဲ့ သတ်ဖြတ်ခြင်း ခံခဲ့ရတာပါ။ ဒါပေမဲ့ တရားမ၀င် သွားလာသူ အရေအတွက်ဟာ တစ်နှစ်ချင်းစီ အလိုက် မြင့်တက်နေပါတယ်။ ၂၀၁၃ မှာ ၅၈၀၀၀ ပဲ ရှိရာက ၂၀၁၄ မှာ ၆၃၀၀၀ ကျော် ဖြစ်လာတယ်။
သူတို့ရဲ့ သွားလာ မှုတွေက မိုးရာသီ ဖြစ်တဲ့ ဇူလိုင် လောက်မှာ လျော့ကျ သွားပေမယ့် အောက်တိုဘာမှာ သွားလာမှု ပိုများလေ့ ရှိပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ထွက်ခွာ လာသူတွေအဖို့ စိန့်မာတင် ကျွန်းနဲ့ အနီးတ၀ိုက် ကျွန်းတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ခေတ္တ ခိုနားရာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ ဒေသတစ်ဝိုက်မှာပဲ လူကုန် ကူးသူတွေနဲ့ လူမှောင်ခို သမားတွေ ရှိနေပါတယ်။ သူတို့က နေရပ် စွန့်ခွာလာသူတွေကို တရားမ၀င် ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။
လူမှောင်ခိုတွေဟာ ထိုင်းတောင်ပိုင်းနဲ့ မလေးရှား နယ်စပ်မှာလည်း ရှိနေပြီး ဥပဒေပြင်ပ အခြေစိုက် စခန်းတွေ တည်ခဲ့ပါတယ်။ မကြာသေးမီက ထိုင်းတောင်ပိုင်းနဲ့ မလေးရှား နယ်စပ်တွေမှာ တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ရုပ်အလောင်းများ မြှုပ်နှံထားရာ နေရာ ၃၀ ကျော်၊ လူသေ အလောင်း ရာချီ မြှုပ်နှံထားမှုတွေက ဒီစခန်းတွေ ရှိနေခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။
လူကုန် ကူးသူတွေနဲ့ လူမှောင်ခိုတွေက ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော် ဘက်ကို သဘောင်္တွေ စေလွှတ်ပြီး နေရပ် စွန့်ခွာသူတွေကို တရားမ၀င် ခေါ်ဆောင်ပါတယ်။ ကုန်းမြေပေါ် မရောက်ခင်၊ စွန့်ပစ်ခံရချိန်မှာ သင်္ဘောပေါ် လိုက်ပါလာသူတွေဟာ လှေစီးပြေး ဒုက္ခသည်တွေ ဖြစ်လာပါတယ်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ လဆန်းကနေ ဧပြီလ အထိ ပင်လယ်ထဲ မျောနေတဲ့ လှေစီးပြေး ဒုက္ခသည် အရေအတွက် ၂၅၀၀၀ ကျော် ရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ မေလဆန်းမှာ စတင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေ အရ ပင်လယ်ထဲ မျောပါနေသူ လှေစီးဒုက္ခသည် အရေ အတွက် ၇၀၀၀ ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီအထဲက အနည်းဆုံး လူ ၃၀၀ ဟာ ပင်လယ်ထဲမှာပဲ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
လှေစီးပြေး ဒုက္ခသည်တွေက ကူတို့ခ အဖြစ် ပျှမ်းမျှ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၀၀ ကနေ ၃၀၀ အထိ တန်ကြေးရှိတဲ့ ငွေကို ပေးကြရပါတယ်။ ထိုင်းတောင်ပိုင်းကို ဖြတ်ကျော်ပြီး မလေးရှား ရောက်ဖို့အထိ ဆိုရင် ပျှမ်းမျှ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၆၀၀ ကနေ ၂၄၀၀ အထိ ပေးကြရပါတယ်။
ဒါဟာ လူမှောင်ခို သမားတွေအတွက် ကြီးမားတဲ့ ဈေးကွက်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ အနေနဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်နဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွေမှာ တစ်နှစ်ချင်းစီ အလိုက် ပျှမ်းမျှ အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ စီ အကျိုးအမြတ် ရခဲ့သလို ၂၀၁၂ ခု နှစ်ကစပြီး ရေတွက်ရင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၂၅၀ အထိ အကျိုးအမြတ် ရခဲ့တယ်လို့ UNHCR ရဲ့ အချက်အလက်တွေက ပြောပါတယ်။
■ မြန်မာကို ဘာကြောင့် အပြစ်ပုံချ
မေလဆန်းမှာ ပေါ်လာခဲ့တဲ့ လှေစီးပြေး ဒုက္ခသည်တွေ ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံက မဟုတ်ပေမယ့် ဘာကြောင့် မြန်မာအပေါ် အပြစ် ပုံချရတာလဲ။ မြန်မာကို ဘာကြောင့် တာဝန် ယူခိုင်း နေကြတာလဲ။ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာရင်းမြစ်ဟာ မြန်မာကြောင့်ဆိုပြီး ဘာကြောင့် ပြောနေကြတာလဲ။
၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွက် အာဆီယံ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ကို မလေးရှားနိုင်ငံက ရယူ ထားပါတယ်။ သူ့ နိုင်ငံတွင်းမှာတင် နိုင်ငံရေး ပြဿနာ၊ တရားမ၀င် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်မှု မရှိသေးပါဘူး။
ဒါ့အပြင် ထိုင်းတောင်ပိုင်းက တစ်ဆင့် မလေးရှားနယ်စပ် ကျိုးပျက်မှု ကိုလည်း ဖြေရှင်းရ ခက်နေပါတယ်။ ဒီပြဿနာတွေမှာ နှစ်နိုင်ငံစလုံးက နယ်စပ် လုံခြုံရေး အရာရှိတွေ ပါဝင် ပတ်သက်မှုရှိနေပြီး အကျင့်ပျက် ခြစားမှုတွေနဲ့ ရောထွေးနေပါတယ်။
မလေးရှား အာဆီယံ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်နေချိန်မှာ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေကို နိုင်ငံသား အခွင့်အရေး ပေးဖို့ ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံ အဖွဲ့အစည်းတွေက တွန်းအား ပေးလာပါတယ်။ ဒီကိစ္စမှာ မလေးရှား အာဏာပိုင်တွေလည်း ပါဝင်ပတ်သက် ခဲ့နေပါတယ်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဧပြီ နောက်ဆုံးပတ်က လုပ်တဲ့ မလေးရှား အာဆီယံ ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲ ကာလမှာ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာအရေး မြန်မာကို တွန်းအားပေးဖို့ ကြိုးစားခဲ့ ကြပါတယ်။ မြန်မာဘက်က ပယ်ချခဲ့တာကြောင့် မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မလေးရှား ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဘာဒါဝီက အာဆီယံ လူထုဖိုရမ်က တစ်ဆင့် မြန်မာကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန် ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဧပြီနောက်ဆုံးပတ် အာဆီယံ ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲမှာ ဘင်္ဂါလီရို ဟင်ဂျာအရေး အဆိုတင်မှု မအောင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့ မေလဆန်းမှာ ဖြစ်လာတဲ့ ကိစ္စတွေကို အကြောင်းပြုပြီး ဖိအားပေးဖို့ ထပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီတစ်ကြိမ် လှုပ်ရှားမှုမှာ အာဆီယံခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေ ပါလာပါတယ်။
အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဆူရင်ပစ် ဆူဝမ်၊ မလေးရှား ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဘာဒါဝီ၊ ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဟောင်း ခါဆစ်ပီယိုမြှာ၊ မလေးရှား နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဟောင်း အယ်လ်ဘာတို့ လေးဦးက အာဆီယံ ခေါင်းဆောင်တွေဆီ ဧပြီလထဲမှာ စာရေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုစာရေးခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို မလေးရှား နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး အယ်လ်ဘာ ကိုယ်တိုင် မေ ၁၈ ရက်ထုတ် ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းစာမှာ ရေးခဲ့တဲ့ ASEAN, UN must help Burma resolve Rohingya crisis ဆောင်းပါးမှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အယ်လ်ဘာဟာ လက်ရှိ အချိန်မှာ အစ္စလာမ်မစ်ကောင်စီ (OIC) ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အကြံပေးဖြစ်ပါတယ်။ သူရေးတဲ့ ဆောင်းပါးကို DVB သတင်းဌာန ၀က်ဘ်ဆိုက်မှာလည်း မေ ၁၈ ရက်မှာပဲ ထပ်မံဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
သူ ဖြစ်ချင်နေတာက မြန်မာနဲ့ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာအရေးကို ကုလသမဂ္ဂ၊ အာဆီယံ၊ မြန်မာ သုံးပွင့်ဆိုင် Tripartite Core Group (TCG) ဖွဲ့ပြီး ဖြေရှင်းစေချင်တာပါ။
၂၀၀၈ ခုနှစ် နာဂစ် မုန်တိုင်း ဒဏ်သင့်မှုကို ကူညီဖို့ ပြင်ဆင်တုန်းက လုပ်ခဲ့တဲ့ ပုံစံမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
အယ်လ်ဘာရဲ့ ဆန္ဒ အပြည့်အ၀ ဖြစ်မလာပေမယ့် မေ နောက်ဆုံးပတ်ထဲမှာ မလေးရှား၊ ထိုင်းနဲ့ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးတွေ မလေးရှားမှာ တွေ့ခဲ့ပါတယ်။
မေ ၂၉ ရက်မှာလည်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာအတွင်း တရားမ၀င် ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှု ဆိုင်ရာ အထူး အစည်းအဝေးကို လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အစည်းအဝေးကို မြန်မာနိုင်ငံက ၀န်ကြီး အဆင့် မသွားဘဲ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အဆင့်ကို စေလွှတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထိရောက်တဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေ လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေ အပြင် မကြာခင် အချိန်မှာ လှေစီးပြေး ဒုက္ခသည်အရေး ဖြေရှင်းဖို့ အာဆီယံ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ သီးခြား အစည်းအဝေး တစ်ရပ်လုပ်ဖို့ မလေးရှားနိုင်ငံက ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ မလေးရှား အာဏာရှင် ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် မဟာသီကလည်း မြန်မာအစိုးရနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်တိုက်ခိုက် နေပါတယ်။
■ နောက်ကွယ်မှာ OIC ရှိတယ်
မလေးရှား နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဟောင်း အယ်လ်ဘာနဲ့ မလေးရှား အာဏာပိုင် အဟောင်း၊ အသစ်တွေက ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာ အရေးကို တွန်းအားပေးရတာ အကြောင်းရှိပါတယ်။
အယ်လ်ဘာဟာ OIC ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အကြံပေး ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ လှုပ်ရှားမှုရဲ့ နောက်မှာ OIC ရှိနေပါတယ်။ ဒါကို မေ ၂၄ ရက်က ထုတ်ပြန်တဲ့ OIC သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ မေ ၂၇ ရက်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ OIC နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးများ အစည်းအဝေးကို ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။
OIC ရဲ့ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်မှာ မြန်မာက ဖိနှိပ်ခံ မွတ်စလင် လူနည်းစုတွေကို ကူညီ ထောက်ပံ့ဖို့ သူတို့ ရင်းမြစ်တွေ အသုံးပြုပြီး လှုပ်ရှားမှု စတင်နေပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ အဓိက ရည်ရွယ်တာက ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာတွေကိုပါ။
ဒါ့အပြင် သူတို့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အကြံပေး အယ်လ်ဘာက တက်ကြွစွာ လှုပ်ရှားနေပြီး ဒေသတွင်း NGO တွေနဲ့ အာဏာပိုင်တွေကိုလည်း ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ OIC က ဆိုပါတယ်။
ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရတွေ ရပ်တန့်ဖို့၊ နိုင်ငံသား အသိအမှတ်ပြုဖို့နဲ့ နေရပ် ပြန်နိုင်အောင် လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်း မြန်မာအစိုးရကို နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ဖိအားပေးဖို့ လိုတယ်ဆိုတာလည်း သူတို့က ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကမ္ဘာတစ်လွှားမှာ ရှိနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အနေနဲ့ “ရခိုင်ရိုဟင်ဂျာ ယူနီယံ” ကို ထူထောင်ပြီး နိုင်ငံတကာ ထောက်ခံမှု ရအောင် ဆောင်ရွက်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်ဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရှိနေတဲ့ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ အရေးတင် မကဘဲ ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံပြီး နိုင်ငံတကာကို ရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံမဲ့နိုင်ငံသား ဘင်္ဂါလီ ၄ ဒသမ ၂ သန်းကျော် အရေးအတွက် မြန်မာကို ဖိအားပေးဖို့ ပြင်ဆင်တာလို့ ယူဆပါတယ်။
■ အော်စလို ကွန်ဖရင့်
မေ ၂၇ ရက်မှာ OIC နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးများ အစည်းအဝေးကို ကူဝိတ်မှာ လုပ်ပါတယ်။ အဲဒီ ကာလမှာပဲ နော်ဝေနိုင်ငံ အော်စလိုမြို့မှာ The Oslo Conference to End Myanmar's Persecution of Rohingyas ကို လုပ်ပါတယ်။
ကွန်ဖရင့်မှာ ဂျော့ဆိုးရော့စ်၊ မဟာသီတို့က ဗီဒီယိုဖိုင်တွေက တစ်ဆင့် မိန့်ခွန်းပြောပါတယ်။
ဒီပွဲမှာ OIC ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အကြံပေး မလေးရှား နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဟောင်း အယ်လ်ဘာလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အစည်းအဝေး ကာလမှာ မြန်မာ ဘုန်းတော်ကြီး သုံးပါး၊ ဒေါက်တာ ဇာနည်၊ အဆိုတော် မွန်းအောင်တို့ အပြင် မြန်မာနိုင်ငံက သွားတက်သူတွေ အဖြစ် သတင်းစာဆရာ ဦးစည်သူအောင်မြင့်နဲ့ စာရေးဆရာ ညီပုလေးတို့ကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ အရေးမှာ မြန်မာကို တစ်ဖက်သတ် အပြစ်တင် လေ့ရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်ရေး ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း ကွင်တားနား၊ တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်း သတင်းထောက် ဟန်နာဘိခ်ျတို့လည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
စာရေးဆရာ ညီပုလေးက သူ့ကို နော်ဝေက မြန်မာ အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ်က ဖိတ်လို့ သွားခဲ့တယ်၊ လေ့လာသူအနေနဲ့ တက်ခဲ့ပြီး ၀င်ဆွေးနွေးတာမျိုး မရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
မြန်မာ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနကတော့ အော်စလို ကွန်ဖရင့်မှာ ပြောဆိုခဲ့တဲ့ တစ်ဖက် စောင်းနင်း အဆိုးမြင် ပြောကြားချက် အားလုံးကို ပယ်ချကြောင်း မေ ၃၀ မှာ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
သေချာတာကေ တာ့ မေလဆန်းမှာ ပေါ်လာတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေကို အကြောင်းပြုပြီး ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ အစည်းအဝေးတွေ၊ ကွန်ဖရင့်တွေဟာ ချိန်သားကိုက်လို ဖြစ်နေပါတယ်။
■ အမေရိကန်နဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေ သိထားဖို့
ဒီအချိန်မှာပဲ အမေရိကန်၊ ဗြိတိန် အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ သတင်းဌာနတွေရဲ့ ရှုမြင်ပုံကလည်း တစ်ဖက်စောင်းနင်း နိုင်ပါတယ်။
မြန်မာ့အရေးမှာ သူတို့ဟာ တုတ်တစ်ဖက်၊ မုန့်တစ်ဖက်နဲ့ ဆက်ဆံလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ မဆန်းပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီလို ဆက်ဆံမှုဟာ ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး မြှင့်တင်မှုတွေမှာ အသုံး ၀င်နိုင်ပေမယ့် ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ အရေးမှာ လုပ်လို့မရပါဘူး။
ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံရုံးနဲ့ လော်ဘီတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကို မေးခွန်းထုတ်ရပါမယ်။ ဗြိတိန်လည်း ထိုနည်းတူစွာပါပဲ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နှစ်ပေါင်း ၂၅ နှစ်အတွင်း သမိုင်းဝင် ဖြစ်လာမယ့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကို မကြာခင် လုပ်ပါတော့မယ်။ ဒီအချိန်မှာ ဒီမိုကရေစီ အရေးအတွက်လို့ ပြောဆိုနေတဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ UN တို့ရဲ့ ရိုဟင်ဂျာ အရေး လုပ်ရပ်တွေက ရွေးကောက်ပွဲကို အာရုံ လွှဲသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီလုပ်ရပ်တွေကို ဆက် လုပ်နေမယ်ဆိုရင် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် တစ်သက်လုံး လုပ်ပေးလာခဲ့တဲ့ မိတ်ဆွေ နိုင်ငံတွေ အဖြစ်ကနေ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ရန်သူ ဖြစ်သွား ပါလိမ့်မယ်။
အာဆီယံကတော့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ တစ်ခုချင်းစီရဲ့ ပြည်တွင်းရေး ၀င်မစွက်ဖက်ရေး မူကြောင့် ရိုဟင်ဂျာ အရေးကို ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာ လွှမ်းမိုး မခံခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ အနောက် နိုင်ငံတွေက အာဆီယံလို မဟုတ်ပဲ ရိုဟင်ဂျာအရေး သံယောင် လိုက်မယ်ဆိုရင် ရန်သူ ဖြစ်သွားရုံကလွဲပြီး ဘာမှ အကျိုးရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီနေရာမှာ အမေရိကန် အစိုးရရဲ့ မြန်မာအပေါ် သဘောထားနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအပေါ် သဘောထားက မတူညီတာ တွေ့ရပါတယ်။
အမေရိကန်ဟာ တရုတ်နဲ့ ဆက်ဆံရေး ပြေလည်ဖို့ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အိန္ဒိယကို အာရုံ မစိုက်တော့ပါဘူး။ ပါကစ္စတန်နဲ့ အဆင်မပြေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီအခါ ဘင်္ဂါလားဒေ့ရ်ှကို ပိုပြီး အာရုံ စိုက်လာပါတယ်။
၁၉၇၂ ခုနှစ်ကနေ အခုချိန်ထိ အမေရိကန်ဟာ ဘင်္ဂါလားဒေ့ရ်ှရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အဓိက မိတ်ဖက်နိုင်ငံ ဖြစ်နေသလို အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းထောင်ချီ အကူအညီတွေ ပေးနေဆဲပါ။
အမေရိကန် ကုမ္ပဏီတွေ ဖြစ်တဲ့ ရှပ်ဖ်ဖရွမ် (Chevron) နဲ့ ကိုနိုကိုဖိလစ် (ConocoPhilips) တို့က ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းမှာ အများဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပါတယ်။
ဒီအချက်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အမေရိကန်ဟာ သူ့ရဲ့ အကျိုး စီးပွားအတွက် မြန်မာထက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ပို ဦးစားပေးထားပြီး ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ အရေးမှာလည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို အပြစ် မပြောဘဲ မြန်မာကိုပဲ ဘာကြောင့် အပြစ် ပြောနေသလဲ ဆိုတာ ပေါ်လွင်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ သတင်းဌာနတွေကတော့ ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာ အရေးမှာ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ရန်သူလို ဖြစ်နေပါပြီ။
ဒီအထဲမှာ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ ဖော်ပြမှုတွေဟာ ကျန်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာ မျှတမှုရှိတယ် ထင်ရပေမယ့် ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာ အရေးမှာ ဒီလို မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအတွက် လည်း မေးခွန်းထုတ်စရာတွေ ရှိပါတယ်။
ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ အရေးမှာ အပိုင်း နှစ်ပိုင်း ရှိပါတယ်။ တစ်ခုက လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယတစ်ခုက နိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားပါ။ ဒီကိစ္စမှာ နိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားကိုပဲ ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ အမုန်းတရား အခြေခံပြောတာ မဟုတ်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ရှည်လျားတဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို ကြည့်ပြီး ပြောတာပါ။
■ ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ လာရာ
ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မရှိပါဘူး။ ရိုဟင်ဂျာ အသုံးအနှုန်းတော့ ရှိပါတယ်။
မြန်မာ့ စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ ၉၊ စာမျက်နှာ ၈၉ မှာ “မေယုနယ်ခြားခရိုင်” အကြောင်းကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ မေယုနယ်ခြား ခရိုင်ဆိုတာ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော၊ ရသေ့တောင် အနောက်မြောက်ဒေသတွေ ပါဝင်တဲ့ ခရိုင်တစ်ခုကို ပြောတာပါ။
“မေယုနယ်ခြားခရိုင်တွင် လူဦးရေ ၄ သိန်းကျော် ၅ သိန်းနီးပါး ရှိ၏။ များသောအားဖြင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းနှင့် တံငါလုပ်ငန်းများဖြင့်သာ အသက်မွေးကြသည်။ လူများစု (၇၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်)မှာ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဖြစ်၍ ရခိုင်၊ ဒိုင်းနက်၊ မြို၊ ခမွီး စသော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများလည်း နေထိုင်လျက်ရှိသည်” ဆိုပြီး စွယ်စုံကျမ်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
မြန်မာတိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာ မရှိပါဘူး။ သူတို့တွေက တစ်ဖက်နိုင်ငံကနေ ရောက်လာကြသူတွေပါ။ ကိုလိုနီခေတ်မှာ ၀င်လာခဲ့တယ်။ အင်အား ကြီးလာချိန်မှာ မွတ်ဆလင် ပြည်နယ် ထူထောင်ရေးအထိ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါက တစ်ချက်ပါ။
နောက်တစ်ချက်က ၁၉၅၅-၅၆ ခုနှစ် ဖဆပလအစိုးရ ဦးနု လက်ထက်မှာ ကြီးမားတဲ့ အမှားကို လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲရလိုဇောနဲ့ တစ်ဖက်နိုင်ငံက လူမျိုးခြားတွေကို မြန်မာနိုင်ငံထဲ ၀င်ခွင့် ပေးလိုက်တယ်။ ယာယီ နိုင်ငံသား လက်မှတ်၊ မှတ်ပုံတင်တွေကို အလွယ်တကူ ထုတ်ပေးပြီး ၁၉၅၆ ခုနှစ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေးစေခဲ့ပါတယ်။
၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော၊ ရသေ့တောင် ဒေသတွေမှာ ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံ ဘင်္ဂါလီအရေအတွက် ငါးသိန်းနီးပါး ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ စိမ့်ဝင်ပျံ့နှံ့မှုက ရခိုင်ပြည်နယ် အနှံ့အထိ ရောက်ခဲ့ပြီး တဖြည်းဖြည်း အားကောင်းခဲ့ကြပါတယ်။
၁၉၆၆ ခုနှစ်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ စစ်ဆင်ရေး အသွင် ဘင်္ဂါလီစာရင်း ကောက်ယူမှု၊ ၁၉၆၉ ခုနှစ်မှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ မြတ်မွန်စစ်ဆင်ရေး၊ ၁၉၇၄ ခုနှစ်မှာ လုပ်တဲ့ စပယ် စစ်ဆင်ရေးတွေဟာ ဘင်္ဂါလီတွေကို စိစစ်ခဲ့တာပါ။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်မှာ စတင် လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ နဂါးမင်း စီမံချက်က အပြင်းထန်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
နဂါးမင်း စီမံချက် စစ်ဆင်ရေးကြောင့် ဘင်္ဂါလီပေါင်း ၁၅၀၀၀၀ ကျော် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံဘက်ကို ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်သွားပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များ ဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (UNHCR) က ပထမဆုံး ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာ ရှိလာပါတယ်။
သူတို့ အဆိုအရ ဘင်္ဂါလီ ၂၅၀၀၀၀ ကျော် ဘင်္ဂါလားဒေ့ရ်ှဘက် တိမ်းရှောင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုခဲ့သလို နိုင်ငံတကာ မီဒီယာ တစ်ချို့ကလည်း ဘင်္ဂါလီပေါင်း တစ်သိန်းနီးပါး သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ၁၉၇၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှာ တိမ်းရှောင် ဘင်္ဂါလီတွေကို ပြန်လည် လက်ခံဖို့ ဟင်္သာ စီမံချက်ကို ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ ဟင်္သာ စီမံချက်ကြောင့် ပြန်ဝင်လာတဲ့ ဘင်္ဂါလီ အရေအတွက် ၁၉၀၀၀၀ နီးပါး ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထွက်ပြေးသွားသူ အရေအတွက်ထက် ပိုဝင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနောက်ပိုင်း မြန်မာတိုင်း ရင်းသား မဟုတ်တဲ့ ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာတွေ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း နေထိုင်မှု ပိုများခဲ့ပါတယ်။ တရားဝင်နေထိုင်ခွင့် ရသူတွေနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ခိုးဝင်လာသူတွေ ရောထွေးကုန်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူတို့ကို ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲ၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲ၊ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ မဲပေးခွင့် ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို မဲပေးခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အတွက် သူတို့စိတ်ထဲမှာ နိုင်ငံသားဖြစ်မှာပဲဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက် ရှိခဲ့တယ်။ နိုင်ငံသား အသိအမှတ်ပြုဖို့လည်း တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ ၀ှိုက်ကတ်ကိုင်ထားသူတွေ မဲပေးခွင့် မရှိတော့ပါဘူး။ သူတို့ ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ ၀ှိုက်ကတ်တွေကို ပယ်ဖျက်ပြီး နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး လုပ်ဆောင်တော့မှာပါ။
ဒီလို စိစစ်မယ့် အစီအစဉ်အရ မြန်မာနိုင်ငံ ၀ှိုက်ကတ်ကိုင်ထားသူ ၇၉၇၅၀၄ ဦးရှိပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် တစ်ခုတည်းမှာ ၆၆၆၃၈၁ ဦး ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရှစ်သိန်းနီးပါးထဲက လေးသိန်းကျော်က ၀ှိုက်ကတ်တွေကို လာအပ်ထားပြီးပါပြီ။ သူတို့ကို နိုင်ငံသား စိစစ်နေဆဲ ကာလမှာ အစိမ်းရောင်ကတ်တစ်ခု ထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
■ ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲ
နိုင်ငံတကာမှာ ရိုဟင်ဂျာလို့ ပြောရင် တရားဝင် အသိအမှတ်ပြု စာရင်းဝင်ပြီး အခွင့် အလမ်းများစွာ ရကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို စွန့်ခွာပြီး တရားမ၀င် နယ်စပ် ဖြတ်ကျော်နေသူတွေက သူတို့ကိုယ် သူတို့ ရိုဟင်ဂျာ၊ မြန်မာနိုင်ငံက လာတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်က ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ စကားရပ်ကို တီထွင်ခဲ့ကြပါတယ်။
နောက်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကို ခိုးဝင်လာတဲ့ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာက မြန်မာတိုင်းရင်းသား ပြဿနာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ပြဿနာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်လည်း ဒါဟာ နယ်ခြား မလုံခြုံမှုကြောင့် ဖြစ်ရတာလို့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ပြောဖူးပါတယ်။
ဒါကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ပထမအဆင့်က ၁၉၈၂ ခုနှစ် ဥပဒေအရ နိုင်ငံသား စိစစ်ခြင်းပါပဲ။ ရခိုင် ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ ၀ှိုက်ကတ် ၆၆၆၃၈၁ ဦးထဲက ထက်ဝက်လောက်က စိစစ်မှုတွေ လုပ်ရင် နိုင်ငံသား ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ထက်ဝက်ထဲက တစ်ဝက်ကျော်က လည်း နိုင်ငံသားဖြစ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ရှိပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ အစိုးရက နိုင်ငံသား စိစစ်ခြင်းကို ရန်ကုန် အထိ ပြန်လုပ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ အကျင့်ပျက် ခြစားတဲ့ အရာရှိတွေကြောင့် မှတ်ပုံတင် ကိုင်ဆောင်ခွင့် ရထားသူ ဘင်္ဂါလီတွေ ရှိနေပါတယ်။
ဒီလို ကိုင်ဆောင်ထား သူတွေဟာ ကရင်ပြည်နယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းတွေမှာပါ ပျံ့နှံ့နေပါပြီ။ ၀ှိုက်ကတ် ကိုင်ထားတဲ့ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေကို နိုင်ငံသား စိစစ်ရင် မှတ်ပုံတင်ကိုင်ထားတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေကိုလည်း စိစစ်မှု လုပ်သင့်ပါတယ်။
ဒုတိယ အချက်က ၀ှိုက်ကတ်အစား ယာယီထုတ်ပေးမယ့် အစိမ်းရောင်ကတ်နဲ့ မဲပေးခိုင်းတာမျိုး ခွင့်မပြုရပါဘူး။ နိုင်ငံသား စိစစ်မှု မပြီးသေးရင် အဲဒီ မပြီးသေးတဲ့ နယ်မြေမှာ ရွေးကောက်ပွဲ မလုပ်ဘဲ ရွေ့ဆိုင်းလို့ ရပါတယ်။
အထူးသဖြင့် သမိုင်းမှာ ဦးနု၊ ဦးဘဆွေ၊ ဦးကျော်ငြိမ်းအစ၊ ဦးနေ၀င်းအလယ်၊ ဦးသန်းရွှေအဆုံး မဲ လိုချင်တဲ့အခါ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေကို အသုံးချ၊ legitimacy လိုချင်တဲ့အခါ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားတွေကို အသုံးချဆိုတဲ့ အစဉ်အလာဆိုးကို ဆက်မလုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ရန်တိုက် ပေးရာရောက်တဲ့ အပြုအမူတွေကို စွန့်လွှတ် သင့်ပါပြီ။
ဒုတိယ အဆင့်ကတော့ နိုင်ငံသား စိစစ်မှုမှာ အရည်အချင်းနဲ့ မကိုက်ညီသူတွေကို ဒုက္ခသည် စခန်းတွေမှာ ဆက်ထားလိုက်ပါ။ UNHCR နဲ့ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေက သူတို့ကို ဆက်ပြီး ကူညီ ပါလိမ့်မယ်။
တတိယ အဆင့်ကတော့ မြန်မာ-ဘင်္ဂါလားဒေ့ရှ် ကုန်းတွင်း နယ်နိမိတ်တစ်လျှောက် အုတ်ရိုး အသုံးပြု ခြံစည်းရိုး ကာဖို့နဲ့ အကျင့်ပျက် ခြစားမှုကင်းတဲ့ သူတွေကို နယ်စပ်မှာ တာဝန်ပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ကာရံထားတဲ့ ခြံစည်းရိုးဟာ လုံခြုံမှု မရှိသလို ချိုးဖျက် ၀င်ရောက်ဖို့ လွယ်ကူနေပါတယ်။
အစိုးရ အဆက်ဆက် ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာပြဿနာကို အပြီးအပြတ် မဖြေရှင်းခဲ့လို့သာ ဒီနေ့လို ပြဿ နာတွေ ပေါ်လာတာပါ။
ဒီလို မဟုတ်ဘဲ အခုအတိုင်း ဆက်လုပ်နေမယ် ဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အပြစ် ပုံချချင်သူတွေ ဆက်ရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပို ဆိုးလာနိုင်တာက ဒါကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက် အုပ်စုတွေ ခြေကုတ် ၀င်ယူလာနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုတော့ အရှေ့တောင် အာရှ ပင်လယ်ပြင်ထဲက တရားမ၀င် နိုင်ငံဖြတ်ကျော်နေသူတွေ၊ ကမ္ဘာ တစ်လွှား ရောက်ရှိနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံ သန်းချီရှိတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံက မဟုတ်သလို၊ မြန်မာနိုင်ငံက ပြန်ပြီး လက်ခံရမယ့် သူတွေလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါ့အပြင် ကိုယ့်နိုင်ငံသား၊ တိုင်းရင်းသား မဟုတ်သူတွေကို လက်ခံ ရလောက်တဲ့ အထိ မြန်မာဟာ အာရှရဲ့ ဘုံကျွန် မဟုတ်ပါဘူး။ အာရှရဲ့ အမှိုက်ပုံလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
လူကုန်ကူးသူများ၊ လူမှောင်ခိုများနှင့် နေရပ်စွန့်ခွာ တရားမ၀င်ဖြတ်ကျော်သူများ အသုံးပြုသည့် လမ်းကြောင်း (Source : Story Bulider Website)
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ လူဦးရေနှင့် ဒုက္ခသည်စာရင်း (Source : Story Bulider Website)
၂၀၁၃ နှင့် ၂၀၁၄ ခုအတွင်း အရှေ့တောင်အာရှ ပင်လယ်ပြင်၌ တရားမ၀င်ဖြတ်ကျော် သူများစာရင်း (Source : Story Bulider Website)
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများနှင့် အရေအတွက်ပြမြေပုံ (Source : IDMC)
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၏ လူဦးရေတိုးနှုန်းပြဇယား (Source : Story Bulider Website)
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/31/2015 1 အကြံပြုခြင်း